Salaamanews » AMISOM waxay u hanjabtay kooxda Al-shabaab
Home » Warar AMISOM waxay u hanjabtay kooxda Al-shabaab Print - Daabace: SalaamaNews - Dec 4th, 2012 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
AMISOM waxay ku hanjabtay soo afjarka kooxda Al-shabaabBaarlamaanka oo codsaday in la horkeeno Xukuumadda cusubXukuumadda dhexe oo wax laga xumaado ku tilmaantay weerarkii lagu qaaday Sheekh BashiirKismaayo oo haawaneysa iyo dil bililiqo wata oo bilowdayCiidamada dowladda oo Al-shabaab ka qabsaday deegaanno hor leh
Taliska ayaa sheegay in go’aankan ay qaateen kadib markii labo weerar oo fashilmay ay ka dhaceen wadadaasi kuwaasoo lala eegtay kolonyo galbinayay wafdi uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka oo booqday gobolka Shabeellaha hoose.
Taliyaha ciidamada AMSIOM Jeneraal Andrew Gutti
Taliyaha ciidamada AMSIOM Jeneraal Andrew Gutti ayaa war qoraal ah ku sheegay in AMISOM ay sii wadi doonto mudnaan siinta badbaadada shacabka Soomaaliyeed, isagoo intaas ku daray inay AMISOM iyo dowladda federaalka Soomaaliya wadaan dadaallo lagu xaqiijinayo ammaanka gobolka Shabeellaha Hoose.
Jeneraal Gutti wuxuu xusay inay AMISOM sii wadi doonto ka taageeridda dowladda Soomaaliya dadaallada lagu dhisayo ciidan qaran oo xoog leh iyo sidii looga takhalusi lahaa khatarta kooxda al-Shabaab.
Wuxuu sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM looga baahan yahay inaanay is-dhigan kaddib guulihii wax ku oolka ahaa ee kooxda al-Shabaab looga saaray magaalooyinkii waa-weynaa ee koonfurta Soomaaliya.
Hanjabaadda AMISOM waxay ku soo beegantay iyadoo afahyeenka howlgalka Al-shabaab C/casiis Abuu muscab, uu sheegtay in ay ku guuleysteen weerar gaadmo ah oo ay ku qaadeen madaxda dowladda Soomaaliya.
Tags: warar « Qoraalkii HoreGolaha wasiirrada oo ansixiyay miisaaniyadda 2013	Qoraalka Xiga »Taliyaha ciidamada ilaalada wadooyinka oo ku dhaawacmay Muqdisho	Halkan Hoose ku Jawaab